Intsimi enamakhaya eeholide
Usapho olunzima "Agroestate"
Kwindawo ecocekileyo kunye necocekileyo yendalo kufuphi neMoscow kwidolophana yase-Ostashevo, kukho intsapho yelizwe "Agroestate". Le yeyona ndawo ifanelekileyo yokuchitha ixesha lokuphumla kwaye hayi ixesha lokuzonwabisa elikruqulayo nosapho. Ilungele abanxibelelanisi bokuthuthuzela, umoya ococekileyo kunye nokuthula. Ihlathi elijikelezileyo liba lucingo olunamandla ukusuka kwisixeko. Ukuthula kunye nomoya omtsha kunempembelelo enenzuzo. Kufuphi kukho indawo yokugcina amanzi yaseRuza, apho unokonwabela imbonakalo-mhlaba entle.
Ikhompleksi imelwe ngamagumbi eendwendwe kunye nendlu eyahlukileyo. Izinto eziluncedo ziquka: ifenitshala esebenzayo, iiTV zanamhlanje, amagumbi okuhlambela, iishawari. Amanye amagumbi aneziko. I-intanethi engenazingcingo ifumaneka kuyo yonke indawo.
Makhe sijonge ngakumbi kwi-complex, equkethe izindlu, nganye yazo yenzelwe iintsapho ezininzi. Ngaphakathi kukho yonke into yokuhlala kamnandi.
Indlu yokuqala imelwe yimigangatho emibini, apho kukho amagumbi okulala amathathu, ikhitshi, ithala leencwadi, amagumbi amabini okuhlambela, igumbi lokuhlambela elinomatshini wokuhlamba.
Indlu yeendwendwe inamagumbi okulala ama-2, elinye linendawo yomlilo, ibhodi yoku-ayina kunye ne-ayini, igumbi lokuhlambela, indlu yangasese kunye nomatshini wokuhlamba.
I-gazebo ibandakanya iholo enkulu enefenitshala ephakanyisiweyo, indawo yomlilo, isethi yeTV, iitafile zesidlo. Kwigumbi elilandelayo kukho i-sofa, kubathandi bomculo - i-synthesizer, indawo yomlilo, kunye nezo ntsapho ezithanda umsebenzi omncinci - itafile ye-ping-pong kunye nezixhobo eziyimfuneko. Kukwakho nekhitshi elixhotyiswe kungekuphela nje izitya kunye nezinye izixhobo zokuzenzela ukutya, kodwa kunye nomatshini wekofu kunye nethosta.
Kukho negumbi lokuhlambela kunye neshawa ye-massage kwi-gazebo.
Kukho "igumbi lokuphumla" elakhiweyo, apho unokuphumla nabantwana. Kukho itafile ye-massage, izitulo ezishukumayo, igumbi lokuhlambela kunye nebhafu yabasetyhini.
Kwintsimi yesakhiwo sentsapho kukho izixhobo ze-barbecue ezi-2, indawo yokuhlambela yamadoda kunye ne-swimming pool, evulekileyo unyaka wonke. Iqula likwanalo neebhatyi zobomi zabantwana.
Ummandla ubiyelwe, kukho iindawo eziluhlaza.
Iintsapho ezininzi zinokuhamba ngokulula kwindawo enezitulo ezinamavili, ekubeni intsimi inkulu.
Kwiintsapho, sinokubonelela ngeenkonzo zokugcinwa kwabantwana ukuze abazali bakhululeke.
Umoya wale ndawo emangalisayo utsala iindwendwe kungekhona nje ehlotyeni, kodwa nasebusika.
Kummandla we-complex kukho ipaki, imyuziyam yembali yendawo, apho unokuya khona kwi-excursion ukuba unqwenela. Kwakhona, kude ne "Agriturismo" yifama yehashe, apho unokukhwela ihashe kubantwana nakubantu abadala. Kufutshane kukho iivenkile zokutya, iikhefi kunye neekhemesti.
Silindele ukuba wonke umntu atyelele!